ငါးထောင်သာသနာ နဲ့ငါးနှစ်အာဏာ – ၀ီရသူ
ငါးထောင်သာသနာ နဲ့ငါးနှစ်အာဏာ
သာသနာ ငါးထောင်ဆိုတာ မှတ်ရတာ လွယ်တယ်၊ တကယ်တော့ နှစ်ပေါင်း များမြောင် ငါးထောင်မကလဲ တည်တန့် နိုင်တယ် လို့ တရား နာ ထားဖူးတယ်။
ဒါက တော့ ငါးနှစ်အာဏာအတွက် ငါးထောင် သာသနာကို ဖျက်ဆီးတဲ့အစိုးရမျိုး မရှိခဲ့ရင် ပြောထားတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် နှင့် နိုင်ငံရေး ရာသီဥတု အ ခြေ အ နေအရဆိုလျင် ငါးထောင်သာသနာသည် ငါးနှစ်အတွင်းမှာပဲ ဒီမိုက ရေ စီအာဏာရှင်များ၏ ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ခံနေရ သည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး၏ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်တော်မူနေကြသည့် အထင်ကရ ဆရာတော်ကြီးများကို အာဃာတ တရားများဖြင့် တရားစွဲ အရေး.ယူ၊ ပိတ်ဆို့ ၊ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ စသည့် အာဏာရှင်တို့ ၏ ထုံးစံ များအတိုင်း ကျင့်သုံးနေကြသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင် ကြားသိ နေကြရသည်။
သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မန္တလေး မစိုးရိမ် တိုက်သစ်မှ စာချ နာယက ကမ္ဘာကျော် ဆရာတေ်ာအား “ငါ့…ရဲဘော်”ဟု ခေါ် ဝေါ်သုံးနှုံး ခြင်းကိုပင် ဆပ်ဆပ်ထိမခံ ဝေဖန် ဆဲရေးနေကြသည့် မိစ္ဆာနီ တစ်ချို့ ၏ အပြုအမူ အပြောအဆိုများသည် မြန်မာပြည်အတွက် အလားအလာ ကောင်းများကို မျှော်လင့်လို့ မရတော့ကြောင်း မီးမောင်း ထိုးပြ နေ ပေပြီ။
‘ငါ့…ရဲဘော်” ဟူသော စကားက ဘယ်လို သူတော်ကောင်းတရားကိုများ ထိခိုက်သွားပါသလဲ…
ငါ့..ရဲဘော်ဟူသော စကားကြောင့် မြန်မာပြည်က ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ များ၏ နေ့ စဉ် ဘ၀ စား ၀တ်နေ ရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေးကိစ္စများကို ထိခိုက်သွားပါသလား…
ငါ့…ရဲဘော်ဟူသော သီတဂူဆရာတေ်ာ ဘုရားကြီး၏ စကားတော်က ဘယ်ဥပ ဒေကိုများ ချိုးဖောက်ရာ ရောက်နေပါသလဲ…
ငါ့..ရဲဘော် ဟူသောစကားကို သုံးနှုန်းတာဟာ နိုင်ငံတော် လျို့ဝှက်ချက် ကို ရောင်းစားရာ ရောက်သွားပါသလား…
ငါ့…ရဲဘော်ဟူသောစကားက ဘယ်ပါတီ၊ ဘယ် အဖွဲ့ အစည်း ဘယ်သူ့ကို မဲထည့်ပါလို့တိုက်တွန်းထားတာလား….
တစ်ဦးတစ်ယောက် သမ္မတဖြစ်ဖို့တစ်နိုင်ငံလုံး ဆုတောင်းခိုင်းတဲ့ဘုန်း ကြီးရဲ့စကားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တတ်ကြပါရဲ့ လား…
ငါ့…ရဲဘော်ဆိုတဲ့စကားက လက်ရှိ NLD အစိုးရရဲ့အာဏာကို လုယူဖို့ပြောဆိုတယ် ထင်နေတာလား…
သီတဂူဆရာတေ်ာ ဘုရားကြီးနှင့် သာသနာပြု ရဲဘော် ရဟန်းတော်များ ကို ရန်သူလို သ ဘောထား၊ လှူ မှုကွန်ယက်မှာ စည်းလွတ် ၀ါးလွတ် စော်ကား ပြောဆို ရေး သားနေသူများကို လက်ရှိ NLD အစိုးရက ဘာေ ကြောင့်များ လွှတ်ပေးထားတာလဲ…
အာဏာမရခင် ဆယ်စုနှစ်များဆီတွင်…အာဏာလိုချင် တယ်… အာ ဏာပေးပါလို့နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းပေါင်းစုံရဲ့အားနဲ့တစာစာ အော်ဟစ် တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ရည်ရွက်ချက်က ငါးနှစ်စာ အာဏာနဲ့ ငါး ထောင် သာသနာကို ဖျက်ဆီးဖို့ လား…
ကိုယ်သမိုင်း ကိုယ် ရေးကြတာဖြစ်လို့ …ငါးနှစ်စာအာဏာကို တ လွဲ အသုံးချပြီး ငါးထောင်သာသနာကို ဖျက်ဆီးရင်လဲ ကိုယ့် ကာယကံ၊ ကိုယ်ဝစီကံ၊ ကိုယ့် မ နောကံ ကိုယ့်ဆီပဲ ပြန်လာတော့ မှာဆိုတော့ ၂၀၂၀မှာ အ ဖြေရှာဖို့သေချာနေပါပြီ….
ငါးနှစ်စာ အာဏာအတွက် ငါးထောင်သာသနာကို ချနင်း ဖျက်ဆီး မိုက်လုံးကြီးခြင်းမှ ရှောင်ကြင်နိုင်ကြပါစေဟူ၍…၂၀၂၀ကို စောင့်မျှော် ရင်းဖြင့်….
ငါးထောငျသာသနာ နဲ့ ငါးနှဈအာဏာ
သာသနာ ငါးထောငျဆိုတာ မှတျရတာ လှယျတယျ၊ တကယျတော့ နှဈပေါငျး မြားမွောငျ ငါးထောငျမကလဲ တညျတနျ့နိုငျတယျ လို့တရား နာ ထားဖူးတယျ။
ဒါက တော့ ငါးနှဈအာဏာအတှကျ ငါးထောငျ သာသနာကို ဖကျြဆီးတဲ့ အစိုးရမြိုး မရှိခဲ့ရငျ ပွောထားတာပဲဖွဈနိုငျတယျ။
လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဗုဒ်ဓသာသနာတျော နှငျ့ နိုငျငံရေး ရာသီဥတု အ ခွေ အ နအေရဆိုလငျြ ငါးထောငျသာသနာသညျ ငါးနှဈအတှငျးမှာပဲ ဒီမိုက ရေ စီအာဏာရှငျမြား၏ ထိုးနှကျ တိုကျခိုကျခွငျးမြားကို ခံနရေ သညျ။
ဗုဒ်ဓသာသနာတျောကွီး၏ တာဝနျမြားကို ဆောငျရှကျတျောမူနကွေသညျ့ အထငျကရ ဆရာတျောကွီးမြားကို အာဃာတ တရားမြားဖွငျ့ တရားစှဲ အရေး.ယူ၊ ပိတျဆို့၊ ဖမျးဆီး ထောငျခြ စသညျ့ အာဏာရှငျတို့၏ ထုံးစံ မြားအတိုငျး ကငျြ့သုံးနကွေသညျကို မကျြဝါးထငျထငျ တှေ့မွငျ ကွားသိ နကွေရသညျ။
သီတဂူ ဆရာတျောဘုရားကွီးက မန်တလေး မစိုးရိမျ တိုကျသဈမှ စာခြ နာယက ကမ်ဘာကြျော ဆရာတျောအား “ငါ့…ရဲဘျော”ဟု ချေါ ဝျေါသုံးနှုံး ခွငျးကိုပငျ ဆပျဆပျထိမခံ ဝဖေနျ ဆဲရေးနကွေသညျ့ မိစ်ဆာနီ တဈခြို့၏ အပွုအမူ အပွောအဆိုမြားသညျ မွနျမာပွညျအတှကျ အလားအလာ ကောငျးမြားကို မြှျောလငျ့လို့မရတော့ကွောငျး မီးမောငျး ထိုးပွ နေ ပပွေီ။
‘ငါ့…ရဲဘျော” ဟူသော စကားက ဘယျလို သူတျောကောငျးတရားကိုမြား ထိခိုကျသှားပါသလဲ…
ငါ့..ရဲဘျောဟူသော စကားကွောငျ့ မွနျမာပွညျက ရဟနျးရှငျလူ ပွညျသူ မြား၏ နစေ့ဉျ ဘ၀ စား ဝတျနေ ရေး ပညာရေး ကနျြးမာရေးကိစ်စမြားကို ထိခိုကျသှားပါသလား…
ငါ့…ရဲဘျောဟူသော သီတဂူဆရာတျော ဘုရားကွီး၏ စကားတျောက ဘယျဥပ ဒကေိုမြား ခြိုးဖောကျရာ ရောကျနပေါသလဲ…
ငါ့..ရဲဘျော ဟူသောစကားကို သုံးနှုနျးတာဟာ နိုငျငံတျော လြို့ဝှကျခကျြ ကို ရောငျးစားရာ ရောကျသှားပါသလား…
ငါ့…ရဲဘျောဟူသောစကားက ဘယျပါတီ၊ ဘယျ အဖှဲ့အစညျး ဘယျသူ့ ကို မဲထညျ့ပါလို့ တိုကျတှနျးထားတာလား….
တဈဦးတဈယောကျ သမ်မတဖွဈဖို့ တဈနိုငျငံလုံး ဆုတောငျးခိုငျးတဲ့ ဘုနျး ကွီးရဲ့ စကားနဲ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့တတျကွပါရဲ့လား…
ငါ့…ရဲဘျောဆိုတဲ့ စကားက လကျရှိ NLD အစိုးရရဲ့ အာဏာကို လုယူဖို့ ပွောဆိုတယျ ထငျနတောလား…
သီတဂူဆရာတျော ဘုရားကွီးနှငျ့ သာသနာပွု ရဲဘျော ရဟနျးတျောမြား ကို ရနျသူလို သ ဘောထား၊ လှူ မှုကှနျယကျမှာ စညျးလှတျ ဝါးလှတျ စျောကား ပွောဆို ရေး သားနသေူမြားကို လကျရှိ NLD အစိုးရက ဘာေ ကွောငျ့မြား လှတျပေးထားတာလဲ…
အာဏာမရခငျ ဆယျစုနှဈမြားဆီတှငျ…အာဏာလိုခငျြ တယျ… အာ ဏာပေးပါလို့ နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးပေါငျးစုံရဲ့ အားနဲ့ တစာစာ အျောဟဈ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ ရညျရှကျခကျြက ငါးနှဈစာ အာဏာနဲ့ ငါး ထောငျ သာသနာကို ဖကျြဆီးဖို့လား…
ကိုယျသမိုငျး ကိုယျ ရေးကွတာဖွဈလို့…ငါးနှဈစာအာဏာကို တ လှဲ အသုံးခပြွီး ငါးထောငျသာသနာကို ဖကျြဆီးရငျလဲ ကိုယျ့ ကာယကံ၊ ကိုယျဝစီကံ၊ ကိုယျ့ မ နောကံ ကိုယျ့ဆီပဲ ပွနျလာတော့မှာဆိုတော့ ၂၀၂၀မှာ အ ဖွရှောဖို့ သခြောနပေါပွီ….
ငါးနှဈစာ အာဏာအတှကျ ငါးထောငျသာသနာကို ခနြငျး ဖကျြဆီး မိုကျလုံးကွီးခွငျးမှ ရှောငျကွငျနိုငျကွပါစဟေူ၍…၂၀၂၀ကို စောငျ့မြှျော ရငျးဖွငျ့….